“Waxaan ka caawin doonaa Cristiano siduu ku jibin lahaa RIKOORRO kale oo cusub” – Sarri oo kasoo muuqday shirkiisii Jaraa’id ugu horeeyay ee Juventus.. + SAWIRRO – Gool FM
(Italy) 20 June 2019. Macalinka cusub ee kooxda Juventus Maurizio Sarri ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay kaddib markii uu ogaaday in Bianconeri ay xiiseeneyso adeegiisa.
Juventus oo kala soo saxiixatay Maurizio Sarri Kooxda Chelsea ayaa maanta si rasmi ah ugu soo bandhigtay saxaafada, wuxuuna shir jaraa’id ku qabtay qolka shirarka ee Allianz Stadium.
Maurizio Sarri oo shirkan jaraa’id lagu weydiiyay su’aalo dhowr ah ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
“Codsiyada iiga yimid Juventus wuxuu ahaa dareen weyn, wuxuu igaaga dhignaa dareen aad u fiican, sababtoo ah waxaan arkay in kooxda ay si dhab ah ii dooratay”.
60-jirkan ayaa sheegay inuusan dareemin inay la saxiixaneyso kooxda Juventus, kaddib markii uu ka tagay Chelsea oo ku guuleystay UEFA Europa League, wuxuu sheegay inuu ahaa go’aan kacdoon ah uu gaaray xirfadiisa.
Intaas kaddib Maurizio Sarri ayaa ka hadlay fikirkiisa kaga aadan in Juventus uu tababare ugu noqon doono xiddiga ku guuleystay 5 jeer abaalmarinta 2018 Ballon d’Or ee Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Chelsea, waxaan soo tababaray qaar ka mid ah ciyaartoy waa weyn, laakiin tababarka Cristiano Ronaldo waa talaabo kale aan horey u qaaday, waxaan jeclaan lahaa inaan ka caawiyo inuu jibiyo rikoorro kale ee badan”.
RASMI: Real Madrid oo iska iibisay ciyaaryahankeeda ugu horeeyay xagaagan